3 Khona-ke, ungcono ngani umJuda,+ noma, iyini inzuzo yokusoka?+ 2 Ungcono kakhulu ngazo zonke izindlela. Okokuqala, ngenxa yokuthi waphathiswa amazwi angcwele kaNkulunkulu.+ 3 Khona-ke siyini isimo? Uma abanye bengalubonisanga ukholo,+ ingabe mhlawumbe ukuntula kwabo ukholo kuyokwenza ize ukuthembeka+ kukaNkulunkulu?+ 4 Kwangathi kungelokothe kube njalo! Kodwa uNkulunkulu makatholakale eqinisile,+ nakuba wonke umuntu engatholakala engumqambimanga,+ njengoba nje kulotshiwe ukuthi: “Ukuze ubonakaliswe ulungile emazwini akho futhi unqobe lapho wahlulelwa.”+ 5 Nokho, uma ukungalungi kwethu kwenza ukulunga kukaNkulunkulu+ kuqhame, sizothini? UNkulunkulu akayena ongalungile+ lapho ekhipha intukuthelo yakhe, akunjalo? (Ngikhulumisa okomuntu.+) 6 Kwangathi kungelokothe kube njalo! Ngaphandle kwalokho, uNkulunkulu uyolahlulela kanjani izwe?+ 7 Nokho uma ngenxa yamanga ami iqiniso likaNkulunkulu+ liye lenziwa lavelela ngokwengeziwe kwaba yinkazimulo kuye, kungani futhi ngisahlulelwa njengesoni?+ 8 Futhi kungani kungashiwo ukuthi: “Masenze izinto ezimbi ukuze kuvele izinto ezinhle”+ njengoba nje simangalelwa ngakho ngamanga+ nanjengoba nje abanye abantu bethi sisho kanjalo? Isahlulelo+ ngokumelene nalabo bantu sivumelana nobulungisa.+ 9 Khona-ke kuthiwani? Ingabe sisesimweni esingcono?+ Phinde! Ngoba ngenhla sithé amaJuda kanye namaGreki bonke bangaphansi kwesono;+ 10 njengoba nje kulotshiwe: “Akekho umuntu olungileyo, ngisho noyedwa;+ 11 akekho onokuqondisisa, akekho ofuna uNkulunkulu.+ 12 Bonke baphambukile, bebonke baye baba yize; akekho owenza umusa, akekho ngisho noyedwa.”+ 13 “Umphimbo wabo uyithuna elivulekile, basebenzisé inkohliso ngolimi lwabo.”+ “Ubuthi bezimfezi bungemva kwezindebe zabo.”+ 14 “Futhi umlomo wabo ugcwele ukuqalekisa nenkulumo ebabayo.”+ 15 “Izinyawo zabo ziyashesha ukuyochitha igazi.”+ 16 “Ukuchitha nosizi kusezindleleni zabo,+ 17 futhi abayazanga indlela yokuthula.”+ 18 “Akukho ukwesaba uNkulunkulu phambi kwamehlo abo.”+ 19 Manje siyazi ukuthi zonke izinto uMthetho+ ozishoyo uzibhekisa kulabo abangaphansi koMthetho, ukuze yonke imilomo ivalwe+ futhi lonke izwe lifanelwe ukujeziswa+ uNkulunkulu.+ 20 Ngakho-ke ngemisebenzi yomthetho akukho nyama okuyothiwa ilungile+ phambi kwakhe, ngoba ngomthetho+ kuba khona ulwazi olunembile ngesono.+ 21 Kodwa manje ukulunga kukaNkulunkulu+ kuye kwabonakaliswa ngaphandle komthetho, njengoba kufakazelwa+ nguMthetho+ nabaProfethi;+ 22 yebo, ukulunga kukaNkulunkulu ngokholo kuJesu Kristu,+ kubo bonke abanokholo.+ Ngoba awukho umahluko.+ 23 Ngoba bonke bonile+ futhi bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu,+ 24 futhi kunjengesipho sesihle+ ukuthi ngomusa wakhe ongafanelwe+ kuthiwa balungile ngokukhululwa ngesihlengo+ esakhokhwa uKristu Jesu. 25 UNkulunkulu wammisa njengomnikelo wokuhlawulela+ ngokholo egazini lakhe.+ Lokhu kwakungenjongo yokuba abonise ukulunga kwakhe siqu, ngoba wayethethelela izono+ ezenzeka esikhathini esidlule ngesikhathi uNkulunkulu ebonisa unembe;+ 26 ngenjongo yokuba abonise ukulunga kwakhe siqu+ kule nkathi yamanje, ukuze abe ngolungileyo ngisho nalapho ethi ulungile+ umuntu onokholo kuJesu. 27 Kuphi-ke ukuziqhayisa?+ Kuvalelwe ngaphandle. Ngamuphi umthetho?+ Wemisebenzi?+ Lutho neze, kodwa ngomthetho wokholo.+ 28 Ngoba sithi umuntu kuthiwa ulungile ngokholo ngaphandle kwemisebenzi yomthetho.+ 29 Noma ingabe unguNkulunkulu wamaJuda kuphela?+ Akayena yini nowabantu bezizwe?+ Yebo, ungowabantu bezizwe futhi,+ 30 uma ngempela uNkulunkulu emunye,+ oyothi balungile abantu abasokile+ ngenxa yokholo athi futhi balungile abantu abangasokile+ ngokholo lwabo. 31 Khona-ke, ingabe thina siyawuqeda umthetho ngokholo lwethu?+ Kwangathi kungelokothe kube njalo! Ngokuphambene nalokho, siqinisa umthetho.+